Foddaa Saxaaxa Gabatee keessatti gabatee haaraa uumuu ykn caasaa gabatichaa gulaaluu.
Fooddaa faayilii kuusaa deetaa keessaa, sagoo gabatee cuqaasi. Saaguu - Gabatee Saxaxaa yookin Gulaala - Gulaalafiladhu
Foddaan kabala baafataa kan mataa ofii qaba. Dabalataan ajaja armaan gadii qaba: Saxaaxa Kasaa
Iddoo hiika gabatee
Iddoon kun iddoo caasaan gabatee itti hiikamuu dha.
Maqaa dirree deetaa adda baasa. Note the database restrictions, such as the length of the name, special characters and spaces.
Gosa dirree adda baasa.
Ibsa filannoo adda baasa.
Tarreen irraantoo ajaja qabiyyee baafataa kanaa gadii of keessaa qaba:
Tarree filame gara gabatee muraatti mura
Tarree filame gara gabatee muraatti garagalchi
Tarree filame haqa.
Tarree duuwwaa tarree isa ammaa gubbaatti galchi, yoo gabatee olkaa'amuu baate. Tarree duuwwaa gara dhuma gabateetti galchi yoo gabateen olkaa'ame.
Ajajni kun mallatto mirkaneessu qabaae, dirreen deetaa sarara kana keessa jiru furtuu dursaati. Ajaja cuqaasuun haalojii kakaasuu/ kaka'uumsala dandeessa. Ajajni kan mul'atu yoo maddi deetaa furtuu dursaa gargaare qofaa dha.
Dirree amma filameef amaloota dirree hiika.
Dheerina dirree deetaa adda baasa.
Dirree lakkoofsaaf ykn deesimaaliif lakkoofsa iddoo deesimaalii adda baasa.
Galmee deetaa haaraa keessatti gatii durtii adda baasa.
Sajoon kun Dirree Dhangii qaaqa jedhu bana.
Barruuwwan gargaarsaa agarsiisa.
Title is: Saxaaxa Gabatee